၂၀၁၃ ခုနှစ်မှာ ခေတ်စားလာမည့် ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ ဟိုတယ် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ - Myanmar Network
၂၀၁၃ ခုနှစ်မှာ ခေတ်စားလာမည့် ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ ဟိုတယ် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ
Posted by Yamin Aye on December 19, 2012 at 19:31 in ပညာရေး အခွင့်အလမ်းများ
အရင်တုန်းကတော့ ဒီလို အလုပ်အကိုင် ကျွမ်းကျင်မှုမျိုးကို သင် သတိထားမိမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အခု ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှာ ဟိုတယ် အတော်များများ ဈေးကွက်အတွင်း အလုအယက် နေရာယူလာကြပြီး နိုင်ငံတကာ ခရီးသွားများ မြန်မာနိုင်ငံသို့ အ၀င်များလာခြင်း ရှိကြသည့်အပြင် ဟိုတယ်များကိုလည်း နိုင်ငံတကာ အဆင့်အတန်းမီစေဖို့ သရီးစတား၊ ဖိုးစတား၊ ဖိုက်စတားအဆင့်တွေ သတ်မှတ်လာကြတာကို တွေ့ရှိလာရပါသည်။ ဟိုတယ်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်း လိုအပ်ချက်တွေကိုလည်း စဉ်းစားလို့ လာကြပါပြီ။ ဟိုတယ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်တွေကတော့ အများကြီး ရှိပါသည်။
အခုဆိုရင် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း နိုင်ငံများရဲ့ ဟိုတယ်နယ်ပယ်မှာ ကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်း ခေါ်ယူ ခန့်ထားဖို့ဆိုတဲ့ ကိစ္စက တကယ့်ကို အရေးပါလာတယ်ဆိုတာ သိသာနေပါပြီ။ ဘယ်လို ကျွမ်းကျင် ၀န်ထမ်းမျိုး လိုအပ်နေပြီလဲ။ ဘယ်နေရာတွေမှာ ဘယ်ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ အဆင်ပြေ ဆက်သွယ်ပြီး ဘယ်လို လူမျိုးတွေ ထားရှိမလဲ သိချင်ကြသူများအတွက်နှင့် ဟိုတယ်ဆိုင်ရာ ဘယ်ပညာရပ်တွေ သင်ယူတတ်မြောက်ဖို့ လိုပြီး အလုပ်ခွင်ထဲမှာ ကိုယ်နဲ့ ကိုက်ညီမယ့်အရာ ဘယ်ဘာသာရပ်တွေ ရှိနေသလဲဆိုတာ အောက်မှာ ဖော်ပြမည့် ဟိုတယ် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများကို ဆက်လက်ကြည့်ရအောင်။ ဟိုတယ်ဟူသော စကားရဲ့ အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ဆိုချက်အရ ခရီးသွားဧည့်သည်များအား တည်းခိုနားနေရန် အိပ်ခန်းနှင့် အစားအသောက်များကို စီစဉ်ရောင်းချသော လုပ်ငန်းတစ်ရပ် ဖြစ်သဖြင့် (Hospitality Industry)ဟူ၍ လည်းကောင်း၊ (People Business)ဟူ၍ လည်းကောင်း ခေါ်ဝေါ် သတ်မှတ်လေသည်။
အထက်ပါ အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ဆိုချက်အရ ခရီးသွား ဧည့်သည်များ တည်းခို နားနေနိုင်သော အိပ်ခန်းများ ပါမှသာ ဟိုတယ်ဟု ခေါ်ဆိုနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဟိုတယ်တစ်ခုတွင် တည်းခိုခန်းများသည် အဓိက အခန်း ကဏ္ဍမှ ပါဝင်လျက်ရှိသည့်အပြင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဟိုတယ်လုပ်ငန်း ဆန်းစစ် ဖော်ပြချက်များအရ အစားအသောက်များ ရောင်းချရရှိသည့် အမြတ်ငွေ နှုန်းထားထက် များစွာ သာလွန်နေသည်မှာ ထင်ရှားလှပေသည်။
၁ဟိုတယ် ဧည့်ကြိုလုပ်ငန်း (Hotel Receptionist)
ဟိုတယ်တစ်ခုတွင် ခရီးသွား ဧည့်သည်များအတွက် အရေးကြီးဆုံး နေရာသည် ဟိုတယ်ဝင်ပေါက်မှ ကြိုဆိုမည့် ဧည့်ကြို ကောင်တာတွင် လုပ်ကိုင်သော ၀န်ထမ်းများရဲ့ အဓိကကျသည့် ဆက်ဆံရေးနှင့် ဧည်ကြို ၀န်ထမ်းများ တိုက်ရိုက် တွေ့ရှိမှုတို့သည် အဓိက ကျလှပေသည်။
Receptionist တစ်ယောက် ရှိသင့်သော အရည်အချင်းများ
(က) ဆက်ဆံရေး ကောင်းမွန်ပြီး ယဉ်ကျေးပြုငှာစွာ ဆက်ဆံ ပြောဆိုတတ်ရမည်။
(ခ) အပြင်အဆင်၊ ၀တ်စားဆင်ယင်မှု Professional တစ်ဦးကဲ့သို့ ဖြစ်ရမည်။
(ဂ) မျက်နှာမှာ အပြုံး အမြဲဆောင်ပြီး စိတ်ရှည်သည်းခံစွာ ပြုမူ ပြောဆိုရမည်။
(ဃ) ဘာသာစကား (International Language) ကျွမ်းကျင်ရမည်။
(င) မိမိလုပ်ငန်းနှင့် ဆိုင်သော (Product Knowledge) ပြည့်စုံရမည် ဖြစ်သည့်အပြင် ဧည့်ကြိုတစ်ယောက်ရဲ့ တာဝန်ဝတ္တရားများလည်း ပြည့်စုံအောင် တတ်ကျွမ်းထားရမည် ဖြစ်ပါသည်။
Hotel’s Receptionist တစ်ယောက်ရဲ့ တာဝန်ဝတ္တရားများ
(က) ဧည့်သည်ကို ဧည့်ခံခြင်း၊
(ခ) ဟိုတယ်ခန်းများ ရောင်းရန်၊ ဧည့်သည်ကို စာရင်းသွင်းရန် စတဲ့ အခန်း သတ်မှတ်ပေးခြင်း၊
(ဂ) အခြားသော ၀န်ထမ်းများနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း၊
(ဃ) ဧည့်သည် မေးသမျှသော ဟိုတယ်အကြောင်း၊ ပြင်ပ သက်ဆိုင်ရာ ဆက်စပ်လုပ်ငန်း ပတ်ဝန်းကျင် အကြောင်းအရာများ၊ ဧည့်သည် စိတ်ဝင်စားတတ်သော အကြောင်းအရာများကို လေ့လာထားပြီး ပြောပြနိုင် ရမည်။
(င) ဧည့်သည်ရဲ့ Account နဲ့ ပတ်သက်သော ကိစ္စများကို တိတိကျကျ လုပ်ဆောင်ပြင်ဆင်ရန်။
(စ) ဧည့်သည်ရဲ့ လုံခြုံရေးနှင့် အရေးပေါ် အခြေအနေများကို ကိုင်တွယ် ဖြေရှင်းနိုင်ရမည်။
(ဆ) ဧည့်သည် တစ်ဦးချင်းရဲ့ အကြောင်းအရာများကို စေ့စပ်သေချာစွာ မှတ်သားထားရမည်ဆိုတဲ့ အဓိက အချက်တွေနဲ့သာ ပြည့်စုံနေမယ် ဆိုရင်ဖြင့် ဟိုတယ်ကြီးများတွင် ဧည်ကြိုလုပ်ငန်းဖြင့် အသက် မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက် နေရာ တစ်နေရာ ရရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။
၂ဟိုတယ် အိပ်ခန်းဆောင်ထိန်းလုပ်ငန်း (Hotel Housekeeping)
လူလူချင်း ပြုစုသည့် လုပ်ငန်းရပ်ဖြစ်သော ဟိုတယ်လုပ်ငန်းတွင် အဓိက အကျိုးအမြတ် ရရှိသည့် ဟိုတယ်အိပ်ခန်းဆောင် ထိန်းသိမ်းခြင်း လုပ်ငန်းများကို စနစ်တကျ ဧည့်ဝတ်ကျေပွန်စွာ ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ဧည့်သည်ရဲ့စိတ်ကျေနပ်မှုကို ရရှိပြီး တည်းခို နေထိုင်သွားသော ဧည့်သည်၏ တစ်ဆင့်စကား တစ်ဆင့်နားသို့ ကြေငြာပေးခြင်းမျိုးကို ရရှိကာ အောင်မြင်သော ဟိုတယ် ဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။
ဟိုတယ် အိပ်ခန်းဆောင်ထိန်း လုပ်ငန်းဆိုသည့်အတိုင်း ကျွမ်းကျင် လေ့ကျင့်ပြီးဖြစ်သော ၀န်ထမ်းများဖြင့် အိပ်ဆောင် လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ရပါသည်။
2. ASSISTANT HOUSEKEEPER
3. LINEN KEEPER
4. LAUNDRY INCHARGE
5. CLEANER/ ROOM ATTENDANT
FUNCTION OF HOUSEKEEPING
(ဟိုတယ်တစ်ခုလုံး သန့်ရှင်းသပ်ရပ် နေစေရန်အတွက်)
(ဧည့်သည်များ သက်တောင့် သက်သာဖြင့် စိတ်တိုင်းကျ တည်းခို နေထိုင်နိုင်ရန်အတွက်)
(ဟိုတယ် အိပ်ခန်းဆောင်တွင်း သာမက ဟိုတယ်တစ်ခုလုံး၏ အတွင်းအပြင် သာယာရေးနှင့် ဆွဲဆောင်နိုင်ရေးတို့အတွက်)
4. GOOD STATE OF REPAIR
(ဧည့်သည်များ အရန်သင့် ချောမွေ့ကောင်းမွန်စွာနှင့် လုံခြုံစိတ်ချစွာ အသုံးပြုနိုင်ရေးအတွက်)
5. WELFARE OF GUEST AND STAFF
(ဧည့်သည်နှင့် ၀န်ထမ်းများ၏ သာရေးနာရေးကိစ္စရပ်များအတွက်)
အိပ်ခန်းဆောင် ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်း၏ အဓိကလုပ်ငန်းကြီး (၅) ချက်ကို နည်းစနစ်ကျနစွာနှင့် ထိရောက်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် အိပ်ခန်းဆောင် ထိန်းသိမ်းရေးဌာနကို စနစ်တကျ ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက် ကြရမည် ဖြစ်ပြီး ယင်းဖွဲ့စည်းပုံတွင် ပါဝင်ကြမည့် အဆင့်ဆင့် တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ကြမည့်သူများသည် သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်း ဘာသာရပ်အလိုက် သင်တန်းများကို တက်ရောက်အောင်မြင်ပြီး ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများ ဖြစ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ အခန်းထိန်းများသည်လည်း ဧည့်သည်များ တည်းခိုနေထိုင်သော အိပ်ခန်းများအတွင်း ၀င်ရောက် လုပ်ဆောင်ရခြင်းကြောင့် လုပ်ငန်း ကျွမ်းကျင်ရုံနှင့် မပြီးဘဲ ရိုးသား ဖြောင့်မတ် မှန်ကန်မှုနှင့်လည်း ပြည့်စုံရန် လိုအပ်ပါသည်။
အိပ်ခန်းဆောင် ၀န်ထမ်းများသည် တစ်ကိုယ်ရေ ကျန်းမာရေးနှင့် ၀တ်စားဆင်ယင်မှုတို့လည်း အထူး ဂရုစိုက် ဆောင်ရွက်ရပါသည်။
၃ဟိုတယ်စားပွဲထိုးလုပ်ငန်း နှင့် Bartender လုပ်ငန်း (Food and Beverage Service Bartender)
ဟိုတယ်စားပွဲထိုး ဆိုသည်မှာ ရိုးရိုးသာမန် လက်ဖက်ရည်ဆိုင်များတွင် လုပ်သော စားပွဲထိုးများထက် ပိုမို သာလွန် ကောင်းမွန်သည့် လုပ်ငန်း အတတ်ပညာရပ် တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါသည်။ စနစ်တကျ လေ့ကျင့်သင်ကြား ပေးထားသည့် Waiter and Waitress များရဲ့ သိသင့်သိထိုက်သည့် အကြောင်းအရာများ တတ်မြောက်ထားမည် ဆိုပါလျှင် အချိန်ပြည့် လုပ်ငန်းများနှင့် အချိန်ပိုင်း လုပ်ငန်းများတွင် အသုံးချနိုင်ပါသည်။
Waiter and Waitress နှင့် Barman တစ်ယောက် ရှိသင့်သော အတတ်ပညာ အရည်အချင်းများ
(က) စားသောက်ခန်း၊ အရက်ခန်း ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း။
(ခ) ဧည့်သည်အား ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ခြင်း။
(ဂ) ဧည့်သည်အား လက်ခံခြင်း၊ နေရာပေးခြင်း။
(ဃ) စားပွဲခင်းကျင်းပုံ နည်းစနစ်များ။
(င) စားသောက်ခန်း မဖွင့်မီ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း၊ စစ်ဆေးခြင်း။
(စ) အဖျော်ယမကာ အမှာလက်ခံခြင်း၊ အမှာလွှာရေးခြင်း။ ဧည့်ခံကျွေးမွေးခြင်း။
(ဆ) အစားအစာ အမှာလက်ခံခြင်း၊ အမှာလွှာရေးခြင်း၊ ဧည့်ခံကျွေးမွေးခြင်း။
(ဇ) ၀ိုင်၊ ရှန်ပိန်များ ဧည့်ခံကျွေးမွေးခြင်း။
(ဈ) ငွေရှင်းလွှာပေးရာတွင် စစ်ဆေးရမည့် အချက်အလက်၊ ငွေရှင်းပုံရှင်းနည်းများ၊ ပြန်အမ်းငွေများ ကျနစွာ ပေးဆောင်ခြင်း။
(ည) လိုက်ပါ၊ ပို့ဆောင်၊ နှုတ်ဆက်၊ ဖိတ်ကြားခြင်း စတဲ့ ၀န်ဆောင်မှုများ ကျွမ်းကျင်စွာ တတ်မြောက်ထားမည် ဆိုပါလျှင် Waiter and Waitress နှင့် Barman ကောင်းတစ်ဦး ဖြစ်လာမည်မှာ အမှန် မုချပင် ဖြစ်ပါသည်။
ယခုအခါ ပွင့်လင်းရာသီ ဖြစ်သည့်အတွက် ဟိုတယ်များ၊ စားသောက်ဆိုင်များမှ ပွဲလမ်းသဘင်များအတွက် အချိန်ပိုင်း ၀န်ထမ်းများကို ခေါ်ယူဝန်ဆောင်မှုများ ပြုလုပ်ကြတာကြောင့် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ပိုမို တိုးတက် ကောင်းမွန်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလည်း အပါအ၀င် ဖြစ်ပါသည်။
ဒီစားဖိုမှူး လုပ်ငန်းကတော့ အများသိတဲ့အတိုင်း ချက်ပြုတ်တဲ့ အပိုင်းဆိုတာတော့ မပြောပဲနဲ့ သိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ခုနောက်ပိုင်း စားဖိုမှူးလုပ်ငန်းများသည် ဟိုတယ်များအတွက် စားဖိုမှူး၊ သင်္ဘောပေါ် ရေယာဉ်များပေါ်အတွက် စားဖိုမှူးအပြင် တစ်ချို့က ၀ါသနာအရ ချက်ပြုတ်တတ်ချင်တဲ့အတွက် မိသားစု စားဖိုမှူးရယ်လို့ ပိုင်းခြားပြီး သင်ယူတတ်မြောက်ထားကြမယ် ဆိုရင်ဖြင့် သင့်အတွက် ပြည်တွင်းနေရာများအပြင် ပြည်ပနိုင်ငံများအထိ လုပ်ကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ပိုမို ရရှိလာမည် ဖြစ်ပါသည်။ ချက်နည်း ပြုတ်နည်း စုံလင်အောင် တတ်မြောက်ထားသူများအတွက် စတားအဆင့် သတ်မှတ်ထားသော ဟိုတယ်ကြီများပါ နေရာ အမှန်တကယ် ရရှိလာမည် ဖြစ်ပါသည်။
ဒါကတော့ ဟိုတယ်တွေအပြင် ခုနောက်ပိုင်း ဒီမုန့်ဖုတ်နည်းပညာရပ်ကို အမျိုးပေါင်း ၈၀ ကျော်၊ ၁၀၀ ကျော်သာ သင်ယူတတ်မြောက် ထားကြမယ်ဆိုရင် ကိုယ်ပိုင် တစ်ပိုင်တစ်နိုင် လုပ်ငန်းငယ်များ လုပ်ကိုင်လာနိုင်ပြီး စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် အသေးစားများတောင် ဖြစ်လာနိုင်စရာ ရှိပါသည်။ ဒီလိုပညာရပ်များကို အထင်သေးလို့ မရဘူးဆိုတာ သင် တကယ် ပညာရပ်တစ်ခုခုသာ တတ်မြောက်ထားမည်ဆိုပါက အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ အချိန်မရွေး ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်များ ရရှိနိုင်ပါမည်။
အဲဒီအတွက် ဘယ်လို ဘာသာရပ်တွေကို ထိထိရောက်ရောက် သင်ယူရမည်ဆိုတာကို မပြောနိုင်ပေမယ့် စီးပွားရေးအမြင် ကျွမ်းကျင်သူများအတွက် နေရာ တစ်နေရာ ရှိနေတယ်လို့ ဆိုလိုပါသည်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှာတော့ နိုင်ငံတကာ Sea Gameလည်း ၀င်လာတော့မှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေး နယ်ပယ်မှာ ကျွမ်းကျင်သူတွေ လိုနေတာတော့ အမှန်ပါ။ ဟိုတယ်ဈေးကွက်ကို နိုင်ငံတကာနှင့်အပြိုင် မြန်မြန် ပြောင်းဖို့ဆိုတာ ကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ အကူအညီလည်း လိုအပ်နေဆဲ ဖြစ်ပါသည်။ နိုင်ငံတကာ ဟိုတယ်တွေနဲ့ ရင်ဘောင်တန်းနိုင်ဖို့ကတော့ နောက်ကျန်ခဲ့ဖို့ မဟုတ်ပဲ ရှေ့ကို တိုးပြီး သွားနေဖို့လည်း အထူး လိုအပ်လှပါတယ်လို့ ပြောရင်းနဲ့ ယခုအချိန်က စပြီး ကိုယ့်ရဲ့ Life အတွက် Professional ပညာရပ်တစ်ခုခုတော့ တတ်မြောက်ထားဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ ပြောကြားရင်း လုပ်ငန်း ကျွမ်းကျင်မှု နယ်ပယ် အလိုက် တကယ့်လုပ်ငန်း လိုအပ်ချက်နဲ့ ကိုက်ညီတဲ့သူများကို ဆိုင်ရာ ဆိုင်ရာ ဌာန အလိုက် ခေါ်ယူခန့်ထားဖို့ ဆိုင်းပြင်နေကြသည်ကို တွေ့ရှိရခြင်းဖြင့် ဟိုတယ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ပိုမို ပေါ်ပေါက်လာပြီဆိုတော့ ဘယ်လို အလုပ်မျိုးနဲ့ ဘယ်လို လူတွေနဲ့ ကိုက်ညီသလဲဆိုတာ သိချင်ကြမယ်လို့ ကျွန်မ ယူဆမိတဲ့အတွက် ဘယ်နေရာတွေနဲ့ ဘယ်အလုပ်က အံဝင်ခွင်ကြဖြစ်မယ်ဆိုတာ ရေးသား တင်ပြလိုက်ရခြင်းပင် ဖြစ်ပါတော့သည်။
မနောဖြူလေး ကလောင်အမည်ဖြင့် ရေးသားသည်။
Permalink Reply by Soe Soe on December 20, 2012 at 14:35
Permalink Reply by Saw Myat Thandar on December 20, 2012 at 15:10
Permalink Reply by Thike Htun on December 20, 2012 at 17:22
Permalink Reply by myo min tun on December 20, 2012 at 17:41
Permalink Reply by Soe Kyaw on December 20, 2012 at 19:06
သင်တန်းကြေးတွေ မတတ်နိုင်တော့ လယ်ပဲလုပ်ရတော့မယ်ထင်တယ်
Permalink Reply by padout,layy on December 21, 2012 at 0:56
Permalink Reply by Sulay Yee on December 21, 2012 at 10:09
Permalink Reply by mayko on December 21, 2012 at 11:14
Permalink Reply by Thi Thi win on December 21, 2012 at 12:34
Permalink Reply by saung chit on December 21, 2012 at 14:00
Permalink Reply by Pyae lay on December 21, 2012 at 16:36
Permalink Reply by tayzarhlaing61275@gmail.com on December 21, 2012 at 20:16